Maraykanka Oo Dabciyay Xiisadii Dagaal Ee ku Wajahnayd Iran. -
Maraykanka Oo Dabciyay Xiisadii Dagaal Ee ku Wajahnayd Iran.
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka, Mike Pompeo ayaa u muuqda inuu hadalkiisa dabciyey kadib wada-hadalladii uu la yeeshay dhaxal-sugaha Abu Dhabi, oo ah ninka ay ka go’ado talada Imaaraadka Carabta, oo ah isbaheysiga Carbeed ee ugu weyn ee Sacuudiga.
Mike Pompeo ayaa sheegay in Trump, oo horey u amray cunqabateeno dheeri ah oo la saaro Iran, uu doonayo in xal nabadeed loo helo xasaradda.
“Waxaan halkan u joognaa inaan dhiso xulufo looga gol leeyahay inay ku guuleysato xal nabadeed. Taasi waa howsheeda, taasi waa waxa madaxweyne Trump uu doonayo inaan ka shaqeeyo, oo aan ku guuleysto, waxaan rajeynayaa in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ay sidaas u aragto” ayuu yiri Pompeo.
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka ayaa wada-hadallo uu hogaamiyayaasha Sacuudiga iyo Imaaraadka kala yeeshay weerarkii lagu qaaday xarumaha salidda Sacuudiga, kaasi oo Washington iyo Riyadh ay ku eedeeyeen Tehran.
Iran waa ay beenisay inay wax lug ah ku lahayd weerarka, oo Pompeo uu ku qeexay dagaal lagu qaaday boqortooyada.
Pompeo ayaa xulufada uu dhisayo ku qeexay “ficil diblomaasiyadeed”, halka wasiirka arrimaha dibedda Iran Mohammed Javad Zarif uu CNN u sheegay in Iran aysan gam’i doonin, haddii ay noqoto inay iska difaacdo weerarka Mareykanka ama Sacuudiga, oo uu sheegay inuu hoggaamin doono “dagaal buuxa”
Xoola-dhaqato Qori-caradii Alshabaab kaga soo Ceshaday Xoolo ay Xoog Uga Qaateen.(Sawiro)
Maxkamada Gobolka Sanaag Oo Sheegtay In Cadaalada ay Carqabad ku Yihiin Madaxda Somaliland.